Fuchsia OS inopinda nhanho yekupedzisira yekuyedzwa kwemukati | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura Google yakaburitsa shanduko dzavakaita nokuti ratidza shanduko kubva kune yako nyowani yekushandisa system "Fuchsia OS" kune yekupedzisira yemukati bvunzo nhanho «imbwa yekudyisa», zvinoreva kushandiswa kwechigadzirwa mumabasa ezuva nezuva evashandi, usati waendesa kune vashandisiwo zvavo.
Muchikamu chino, chigadzirwa chiri muchimiro chakatopasa bvunzo dzekutanga yemapoka akakosha ekuongorora mhando. Usati waendesa chigadzirwa kune veruzhinji, zvakare cheki yekupedzisira inoitwa pakati pevashandi vako ivo havabatanidzwe mukusimudzira.
1 Nezve Fuchsia
2 Ndedzipi shanduko dziripo mukutsigira imbwa?
Kune avo vachiri kuziva nezve Google's Fuchsia chirongwa, iwe unofanirwa kuziva izvo iyo hofori yekutsvaga iri kuvandudza chirongwa chepasirese chekushandisa Inogona kushanda pane chero rudzi rwechigadzirwa, kubva kumabasa uye mafoni kumutengi uye akaisirwa makomputa. Kubudirira inoenderana neruzivo rwekugadzira iyo Android chikuva uye inofunga nezvekushomeka mumunda wechiyero uye chengetedzo.
Iyo system yakavakirwa paZircon microkernel, zvichibva pane zvakaitwa neiyo chirongwa cheLK, chakawedzerwa kuti chishandiswe pamakirasi akasiyana emidziyo, anosanganisira mafoni nemakomputa ako.
Zircon inowedzera LK nerutsigiro rwemaraibhurari akagovaniswa nemaitiro, mushandisi danho, chinhu chinogadzirisa sisitimu, uye inokwanisa-yakavakirwa chengetedzo modhi.
Vatongi vanoitwa semaraibhurari ane simba iyo inoshanda munzvimbo yemushandisi, yakatakurwa neiyo devhost maitiro uye inodzorwa nemaneja wedhijitari (devmg, Chidimbu CheManeja)
Iyo purojekiti ine yayo yakajeka graphical interface yakanyorwa mumutauro weDart, pamwe neiyo chirongwa zvakare inovandudza hwaro hwekuvaka Peridot mushandisi maficha, Fargo package maneja, libc standard raibhurari, Escher rendering system, Magma Vulkan driver, Scenic composite maneja, MinFS, MemFS, ThinFS (Go mutauro FAT mafaera masystem) uye Blobfs mafaera masystem, pamwe Saiye FVM Zvikamu maneja, kuvandudza kunyorera kunopa rutsigiro yemutauro weC / C ++, Dart, pakati pezvimwe zvinhu.
Munguva yebhutsu maitiro, sisitimu maneja anoshandiswa anosanganisira appmgr kugadzira yekutanga software nharaunda, sysmgr kugadzira iyo boot nharaunda, uye basemgr kugadzirisa mamiriro emushandisi uye kuronga iyo login.
Zvekuenderana neLinux mune fuchsia yakarongedzwa Machina raibhurari, iyo inobvumidza iwe kumhanyisa Linux-chirongwa mune yakasarudzika yakasarudzika muchina muchina wakagadzirwa nekushandisa hypervisor zvichibva pane zvakatemwa zircon uye Virtio kernel, nekufananidza nenzira yakarongeka nzira yekuburitsa Linux- zvinoshandiswa pa Chrome OS.
Ndedzipi shanduko dziripo mukutsigira imbwa?
Mune ino vhezheni yemukati yekupedzisira, zvinotaurwa kuti fuchsia.cobalt.SystemDataUpdater chikamu chakawedzerwa kune iyo Omaha yekuvandudza yekufambisa manejimendi system, kuyedza Chrome uye Chrome OS editions uye inopa mirayiridzo yekuchinjisa zvishandiso kubazi idzva re "dogfood-release" bazi uchishandisa fx utility (yakafanana neadb yeFuchsia).
Tambien bootloader seti yakawedzerwa yeiyo «dogfooding» bazi kune inoenderera yekubatanidza system uye matriki akapatsanurwa akaisirwa muchikuva cheFuchsia kuongorora zvabuda.
Makomendi pane shanduko kuFuchsia ivo vanotaura maviri ma link kuendesa iwo matsva fuchsia-updates.googleusercontent.com uye arm64.dogfood-release.astro.fuchsia.com, mune yechipiri chinongedzo Astro ndiro zita remazita eGoogle Nest Hub smart display, iri pachena inoshandiswa nevashandi veGoogle semuenzaniso wekuyedza Fuchsia pachinzvimbo yeyakajairwa Cast Platform firmware.
Iyo Nest Hub interface inoenderana neiyo Dragonglass app iyo inoshandisa iyo Flutter fomati, iyo inotsigirwawo naFuchsia.
Finalmente zvinotarisirwa kuti kana zvese zvikafamba zvakanaka panguva ino yekuyedzwa kwemukati pakati pevashandi, iyo yekupedzisira vhezheni yekusunungurwa kuruzhinji inogona kuuya. Kunyangwe zviri pachena kuti chikonzero chekuramba uchichichengeta muchikamu chekuyedza kupora zvese izvo zvikanganiso uye zvikanganiso zvinoonekwa.
Asi iyo chaiyo bvunzo ichave iri kuvhurwa kuruzhinji, kuwedzera kune izvo vazhinji vanoshamisika kana yanga isiri chimwe chigadzirwa cheGoogle icho kana chikasazadzisa zvavanotarisira chinoguma chave chimwe chigadzirwa chakasiiwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Fuchsia OS inopinda nhanho yekupedzisira yekuyedza mukati
Ini ndaiziva nezve kuvapo kwechirongwa ichi asi ndakanga ndisati ndamboverenga chero chinhu kunyanya nezvazvo. Ndakafarira mharidzo yacho. Ino inguva yekuona kana chiri chakakodzera kutsiva nemaapps kana kwete.